Jaamacadda California State Polytechnic waxay raadineysaa Shri Shantiath Guddoomiye ku-xigeenka Ahimsa Studies (Daraasaadka Rabshadaha) - Ololaha Caalamiga ah ee Waxbarashada Nabadda
Shri Shantiath waxa uu ku hibeeyey gudoomiyaha Ahimsa Studies (Daraasad aan rabshad lahayn), caawiye ama borofisar ku-xigeen
Jaamacadda California Polytechnic University Pomona: Kulliyadda Warqadaha, Farshaxanka, & Sayniska Bulshada: Bani'aadamnimada/Cilmiga Bulshada
Taariikh furan: Oct 19, 2021
Xilliga Kama Dambaynta Diiwangelinta: Noofambar 15, 2021 saacada 11:59 duhurnimo wakhtiga bariga
Jaamacadda Kobanheegan ee Gobolka California, Pomona waxay ku casuuntay codsiyada jagooyinka kuliyadaha raadraaca ee darajada kaaliyaha ama borofisar ku xigeenka Kuliyada Suugaanta, Farshaxanka, iyo Cilmiga Bulshada Ballan ka bilaabmaya sannad dugsiyeedka 2022-2023. Murashaxa guuleysta wuxuu qaban doonaa Guddoomiyaha Shri Shantiath Endowed ee Daraasaadka Ahimsa, wuxuu u adeegi doonaa Agaasimaha Xarunta Ahimsaiyo sidoo kale baro oo raac ajandaha cilmi-baarista firfircoon (eeg faahfaahinta hoose).
Jaamacadda. Cal Poly Pomona waa mid ka mid ah labada jaamacadood ee farsamada gacanta oo ku yaal 23-campus Jaamacadda California nidaamka iyo 11 ka mid ah hay'adaha sida dalka oo dhan. Tan iyo markii la aasaasay 1938, ardayda Cal Poly Pomona waxay ka qaybqaataan waxbarasho khibradeed oo isku dhafan taas oo loo dhan yahay, ku habboon, oo qiimaysa aragtiyo iyo khibrado kala duwan. Iyada oo leh barnaamijyo kala duwan oo shahaado ah oo ku saabsan farshaxanka, aadanaha, sayniska, injineernimada, iyo culuumta xirfadda, jaamacaddu waxay caan ku tahay habka wax-ku-barashada iyo Model Aqoonyahan Macalin.
Jaamacadda waxaa lagu xusay xarunteeda quruxda iyo taariikhiga ah ee 1,400-acre, taas oo mar ahayd beerta jiilaalka ee magnate WK Kellogg. Waxaan qiraynaa in Cal Poly Pomona ay degan tahay dhulalka iyo dhulalka ay ka yimaadeen dadka Tongva iyo Tataavium kuwaas oo ah daryeelayaasha dhulka ee Tovaangar. Ku dhawaad ​​30,000 oo arday oo jaamacada wax ka barata ayaa wax bara oo la talinta jaamacada in ka badan 1,400 oo macalimiin ah taas oo qayb ka ah 54 baccalaureate iyo 29 barnaamijyo shahaado jaamacadeed ah, 11 barnaamijyo shahaadooyin iyo shahaadooyin ah, iyo shahaado jaamacadeed oo hogaamineed.
Si aad ah loogu tixgeliyo ka mid ah machadyada asaageeda ah, Cal Poly Pomona waa lambarka 2 ee gudaha US News iyo World Report Qiimaynta Jaamacadaha ugu sareeya gobolada dawliga ah ee galbeedka waxaana lagu magacaabay lambarka 15 ee kuliyada ugu qiimaha badan qaranka by Money Magazine. Cal Poly Pomona, machad u adeega Isbaanishka iyo Aasiya Ameerikaanka iyo Hay'ad u adeegta Jasiiradaha Baasifiga ee Dhaladka Mareykanka ah, waxay u taagan tahay hogaamiye qaran oo kor u qaadaya dhaqdhaqaaqa bulshada, waxaana lagu daray 25-ka jaamacadood ee ugu sarreeya dalka ee bixiya shahaadooyinka heerka koowaad ee ardayda laga tirada badan yahay Arrimaha kala duwan ee Waxbarashada Sare.
Shuruudaha Wanaagsan ee loo dhan yahay. Waxaan ku haminaynaa inaan noqono tusaalaha jaamacada farsamada gacanta oo loo dhan yahay ee qaranka. Waxaan leenahay go'aan adag si loo wada dhan yahay heer sare iyo waayo-aragnimada waxbarasho ee ka faa'iidayso aragtiyaha iyo waayo-aragnimada kala duwan ee loo baahan yahay si ay u guulaystaan ​​oo ay ugu koraan bulshada kala duwan.
Shaqaalaynta kuliyadaha shaqadu waxay noqon doonaan muujiyaan ballanqaad iyo diiwaanka wax ku biirinta iyada oo loo marayo waxbariddooda, deeqdooda waxbarasho, ama adeegga shuruudahan heersare ee loo dhan yahay (ugu yaraan laba waa in lagu xalliyaa Bayaanka Guusha Ardayga):
Isku-dubarid qiyamka sinnaanta iyo ku-dar-dargelinta waxbarashadooda, deeq-waxbarasho iyo/ama tabarucaadkooda adeeg ee ardayda kala duwan;
Wuxuu ku daraa tabarucaada iyo halganka kooxaha laga tirada badan yahay ee taariikhiga ah ee qowmiyadaha laga tirada badan yahay iyo bulshooyinka waxbarashadooda, shaqadooda aqooneed, iyo/ama tabarucaadkooda adeeg;
Wuxuu qaataa xeeladaha waxbaridda ee taageera waxbarashada iyo guusha ardayda ka soo jeeda dadyowga kala duwan ee ardayda;
La-taliyeyaal iyo ka qayb-qaata dad kala duwan oo arday ah xagga daahfurka, deeq-waxbarasho, iyo waxqabadyo hal-abuur leh;
Waxay ka qaybgelisaa ardayda mashaariicda ku salaysan dhibaatooyinka iyo barashada wax ka qabashada baahiyaha bulshooyinka kala duwan;
Leh aqoonta caqabadaha iyo caqabadaha ardayda iyo macallimiinta aan matali karin ee ku jira edbinta;
La-taliyeyaal iyo caawiyaa ardayda kala duwan ee xiisaynaya sii wadida waxbarashada qalin-jabinta;
Ka qayb-qaata cilmi-baadhis fal-celin-jawaabi ah oo beesha ah oo lala yeesho ardayda iyo bulshooyinka kala duwan;
Khibrad u leeyahay ama muujiya ka go'aan qaadashada waxqabadyo waxbarasho khibradeed iyo barbaarin dad iyo bulshooyin kala duwan oo arday ah; iyo
Inuu khibrad u leeyahay ama muujiyay sida ay uga go'an tahay waxbaridda, deeq-waxbarasho iyo/ama adeeg ka qaybqaata helitaanka, kala duwanaanta, iyo fursadaha siman ee waxbarashada sare.
Kuleejka: Kuliyada Suugaanta, Farshaxanka, iyo Cilmiga Bulshada (CLASS) waxay nolosha u keentaa waayo-aragnimo gacan-ku-ool ah oo firfircoon iyada oo loo marayo culuumta aadamiga, fanka, iyo cilmiga bulshada. Sida wadnaha iyo nafta kambaska, hamiga kuliyada waa in la kobciyo qofka horumarkiisa garaadka, sababaynta anshaxeed, iyo dareenka bilicda si ay u taageeraan hal-abuurka iyo fikirka muhiimka ah ee adduun firfircoon ee caqabadaha tartamaya. Waxaan nahay bulsho kala duwan xagga asalka, khibradda, iyo fikirka, oo ay ka go'an tahay hagaajinta xaaladda aadanaha iyo horumarinta adduunka. Macalimiintayada, ardayda, iyo shaqaalaheenna waxay u heellan yihiin abuurista jawi loo wada dhan yahay oo dhammaan ay ku horumari karaan barnaamijyada Kulliyada, waxqabadyada cilmi-baarista, bandhigyada hal-abuurka, wacyi-gelinta bulshada, iyo khibradaha saxiixa. Baro wax badan oo ku saabsan Kulliyada Suugaanta, Farshaxanka, iyo Sayniska Bulshada iyo 11ka waaxood ee kala duwan www.cpp.edu/class.
Xarunta Ahimsa: Waxaa la aasaasay 2003-04 gudaha CLASS, Xarunta Ahimsa waxay u heellan tahay barida edbinta iyo barashada ku saabsan rabshad la'aanta iyo codsigeeda wax ku oolka ah ee heerar kala duwan: shakhsi, mid shakhsi, bulsho, qaran, iyo caalami ah. Dadaallada waxbarashada iyo wacyigelinta ee Xarunta sida shirarka iyo machadyada xagaaga ee barayaasha K-12 waxay fududeeyaan fahamka rabshad-la'aanta sida xooga isbeddelka. Si aad wax badan uga ogaato Xarunta, booqo: www.cpp.edu/ahimsacenter
Jago TheKulliyadda Suugaanta, Farshaxanka, iyo Sayniska Bulshada waxay raadisaa musharraxiin wax kasta oo anshax ah, gaar ahaan Humanities ama Sayniska Bulshada, kuwaas oo ku takhasusay Daraasaadka Ahimsa (Daraasaadka Rabshadaha La'aanta). Tan waxaa lagu muujin karaa bariis iyo cilmi baaris diiradda la saarayo mowduucyada sida kuwan soo socda:
Taariikhda rabshad-la'aanta iyo dhaqdhaqaaqyada caalamiga ah; hoggaaminta rabshad la'aanta iyo isbeddelka bulshada; anshaxa iyo falsafada rabshadaha; siyaasadda dhaqdhaqaaqa aan rabshad lahayn, xallinta khilaafaadka aan rabshad lahayn, ahimsa ee caadooyinka xigmadda sida Jainism iyo Buddhism; Gacan-ka-hadal la'aanta Gandhian iyo Kingian; rabshad la'aan iyo dhaqamada meditative; haweenka iyo rabshadaha; rabshad la'aan iyo cadaalad soo celin; daryeel, naxariis, iyo rabshad la'aan; dhaqdhaqaaqyada caddaaladda bulshada oo ku qotoma rabshado; iyo cilmu-nafsiga rabshad-la'aanta.
Murashaxa guuleysta wuxuu qaban doonaa Guddoomiyaha Shri Shantiath Endowed ee Daraasaadka Ahimsa wuxuuna u adeegi doonaa Agaasimaha Xarunta Ahimsa.
Booskani wuxuu leeyahay laba door oo waaweyn. Sida kuliyada-track-ka, musharrixiinta waa inay muujiyaan kartida heer sare ee baridda arday-jidh-jaamacadeed oo kala duwan; Awoodda lagu baro koorasyada asaasiga ah ee jira (Rabshadaha La'aanta ee Dunida Casriga ah iyo seminar dhagax ah oo aan rabshad lahayn); xiisaha iyo kartida lagu naqshadeeyo koorsooyin cusub si loo xoojiyo kuwa Yaryar ee Daraasaadka Rabshadla'aanta; oo ay leeyihiin ajande cilmi baaris oo firfircoon oo ku jira daraasadda rabshad la'aanta. Musharixiinta ayaa sidoo kale laga yaabaa inay fursad u helaan inay wax ku bartaan waaxdooda ku saleysan anshaxa. Maamule Xarunta Ahimsa ahaan, musharrixiintu waa inay muujiyaan awoodda ay ku hagi karaan hawlaha kala duwan ee xarunta kuwaas oo ay ku jiraan bixinta barnaamijyada horumarinta xirfadeed ee barayaasha K-12 ee waxbarashada rabshad la'aanta, iyo abaabulka iyo martigelinta barnaamijyo dadweyne oo tayo leh sida casharro, aqoon-is-weydaarsiyo, dood-wadaag, iyo shirar sahminaya ku lug lahaanshaha rabshad la'aanta heer shaqsi, dad, hay'ad, heer qaran ama caalami. Agaasimuhu waxa uu heli doonaa lacagaha deeqaha ah si uu u fuliyo hawlaha kala duwan ee Xarunta iyo horumarinta iyo kobcinta Ahimsa Studies.
Boosku waxa uu xanbaarsan yahay culayska waxbarida ee 2/2 ee labada sano ee ugu horeeya, iyo 3/3 ka dib, oo leh fursado yaraynta koorsada tartan dheeri ah oo loogu talagalay hal-abuurnimada manhajka, cilmi baadhista iyo nashaadaadka cilmiga, iyo hindisayaasha maalgelinta ka baxsan.
Codsiyada Heerarka Kaaliyaha iyo Kaaliyaha labadaba waxaa la siin doonaa tixgelin buuxda.
Shahaadooyinka Ugu Yar - Darajada Kaaliyaha
Ph.D laga bilaabo jaamacad la aqoonsan yahay oo ay doorbidan tahay cilmiga aadanaha ama cilmiga bulshada wakhtiga ballanta.
Shahaadada qalin-jabinta ama shaqo cilmiyeed kale oo la taaban karo oo diiradda saareysa rabshad la'aan; iyo caddaynta xiisaha xooggan ee daba-galka cilmi-baarista cilmi-baarista ee daraasadaha rabshad-la'aanta.
Caddaynta suurtagalnimada in lagu baro koorsooyinka asaasiga ah ee jira ee barnaamijka Daraasaadka Rabshadaha.
Ballanqaadka la muujiyey ee abaabulka barnaamijyada dad waynaha sida muxaadarooyinka, shirarka, ama dood-cilmiyeedka la xidhiidha rabshad la'aanta.
Suurtagalnimada in la bixiyo barnaamijyo ku qotoma rabshad la'aan ee horumarinta xirfadeed ee barayaasha K-12.
Ballanqaadka la-talinta ardayda kooxaha aan la matalin.
Shahaadooyinka La Doorbiday - Darajada Kaaliyaha
U diyaargarowga naqshadaynta shaqada koorsada cusub ee la xidhiidha daraasaadka rabshad la'aanta.
Hal sano ama ka badan oo waayo-aragnimo ah oo jaamacadeed ah oo ku saabsan aagga rabshad la'aanta.
Caddeynta wax-soo-saarka cilmiga (tusaale, daabacado, bandhigyo shirar, muxaadarooyin lagu casuumay).
Caddaynta la shaqaynta ardayda ka socota kooxaha aan la matalin
Xiiseyn xooggan oo ku aaddan wacyigelinta bulshada iyo la shaqeynta Guddiga La-talinta ee Xarunta.
Shahaadooyinka ugu Yar - Darajada Associate
Ph.D oo ka yimid jaamacad la aqoonsan yahay oo doorbidan xagga cilmiga aadanaha ama cilmiga bulshada.
Ugu yaraan afar sano oo waayo-aragnimo waxbarasho jaamacadeed oo waqti-buuxa ah oo ay ku jiraan ugu yaraan laba sano oo waayo-aragnimo waxbarid ah koorsooyin la xiriira rabshad-la'aanta, iyo u diyaargarowga bixinta koorsooyinka asaasiga ah iyo kuwa aasaasiga ah ee Daraasadaha Yaryar ee Rabshadaha La'aanta.
Caddeynta wax-soo-saarka cilmi-baarista (daabacaada, bandhigyada shirarka, muxaadarooyinka lagu casuumay, qoraal-deeqaha, iwm) ee la xiriira rabshad-la'aanta.
U diyaargarowga abaabulka iyo martigelinta barnaamijyada kala duwan ee Xarunta Ahimsa sida muxaadarooyin dadweyne, aqoon-is-weydaarsiyo, iyo shirar.
Awood la muujiyay oo lagu sheegi karo oo lagu bixiyo barnaamijka horumarinta xirfadeed ee khuseeya waxbarashada rabshad la'aanta ee barayaasha K-12.
Ka go'naanta la muujiyay ee la talinta ardayda kooxaha aan la matalin
Shuruudaha La Doorbiday - Darajada Associate
Caddaynta waayo-aragnimada hal-abuurka manhajka ee la xidhiidha Daraasaadka Rabshadaha La'aanta.
Awoodda lagu dhisayo shabakad xirfad leh si loo fududeeyo horumarinta Daraasadaha Rabshadaha La'aanta.
Waayo-aragnimada qaar ee barnaamijyada horumarinta xirfadeed ee barayaasha K-12.
Xiisaha lagu raadinayo taageero ka baxsan, wacyigelinta bulshada, oo ay ku jirto Guddiga La-talinta Xarunta, si loo qaado dadaallo cusub ama lagu ballaariyo hawlaha sii socda ee Xarunta Ahimsa.
Waayo-aragnimada qaar ee hagidda kooxaha ardayda ee aan la matalin.
Boosku wuu furan yahay ilaa laga buuxiyo. Tixgelinta ugu horreysa waxaa la siin doonaa codsiyada la soo buuxiyay November 15, 2021. Soo gudbin hore ayaa lagula talinayaa. Dhammaan agabka codsiga waa in lagu soo gudbiyaa qaab PDF ah iyada oo loo sii marayo Interfolio at http://www.cpp.edu/~faculty-affairs/open-positions/.
Codsiga la dhammaystiray wuxuu ka kooban yahay kuwan soo socda.
Warqad dabool ah oo (a) tilmaamaysa darajada uu murashaxu codsanayo; (b) sharaxayaa barista iyo xiisaha cilmi baarista musharaxa iyo khibrada Daraasaadka Rabshad la'aanta; (c) wax ka qabtaa doorarka iyo masuuliyadaha lagu sheegay sifaynta jagada; iyo (d) waxay bixisaa bayaan ujeedooyinka cilmi-baarista mustaqbalka iyo hawlaha xirfadeed.
Foom codsi oo dhamaystiran ayaa laga heli karaa website-ka codsiga: https://www.cpp.edu/faculty-affairs/documents/acadapplication_feb2017.pdf
Vitae-ka manhajka oo daboolaya dhammaan walxaha lagu qeexay foomka codsiga, taxaya shahaadooyinka xirfadeed, guulaha, iyo waayo-aragnimada laxiriirta booskan, oo ay ku jiraan magacyada, cinwaannada, cinwaannada, cinwaannada iimaylka, iyo lambarrada taleefannada ugu yaraan shan qof oo ku hadli kara si loo helo musharraxa inuu ku guuleysto jagadan.
Saddex warqadood oo tixraac ah oo dhowaan ku saabsan madaxa warqadda ayaa saxeexay oo ku taariikhaysan labadii sano ee la soo dhaafay.
Bayaanka Guusha Ardayga ee muujiya ka go'naanta musharraxa iyo wax ku biirinta ugu yaraan laba ka mid ah shuruudaha heersare ee loo dhan yahay ee kor ku taxan iyada oo loo marayo diiwaanka musharraxa ee waxbaridda, cilmi-baarista, iyo/ama adeegga (ugu badnaan laba bog).
Qoraal aan rasmi ahayn oo muujinaya heerka ugu sarreeya ee laga helay machad waxbarasho oo la aqoonsan yahay. Ciyaartoyga kama dambaysta ah ayaa looga baahan doonaa inay soo gudbiyaan qoraal rasmi ah.
Tusaalaha manhajka iyo soo koobidda qiimaynta waxbarida ee dhawaanta (haddii la heli karo).
Wixii macluumaad dheeraad ah ama caddayn, fadlan kala xidhiidh Dr. Tara Sethia, Guddoomiyaha Guddiga Raadinta adigoo isticmaalaya at [emailka waa la ilaaliyay]
# shaqooyinka tacliinta
# rabshad la'aan
Wac Sarkaalka Mashruuca Waxbarashada - Waxbarashada Nabadda (Cyprus)
U wac soo jeedinta: Isbahaysiga Cilmi-baarista Dhakhaatiirta iyo Junior ee Iska caabinta Rayidka
Waxaa laga yaabaa 10, 2016 Jobs, Research 0
Xarunta Caalamiga ah ee Khilaafka Aan Xadgudubka Ahayn (ICNC) Dhakhaatiirta iyo Iskuduwaha Farsamada Fududeynta Fududeynta waxay u saamaxdaa codsadayaasha uqalma inay fuliyaan cilmi baaris ku saabsan iska caabinta shacabka iyo / ama ay sameeyaan daraasad ka faa'iideysan karta aragtida iska caabinta shacabka, iyadoo qeyb ka ah buuga ay ku qoran yihiin ama buuga soo socda. , maqaalka joornaalka ama cutubka buugga. Sannadka 2016, $ 20,000 guud ahaan ayaa loo qoondeeyay barnaamijkan. Abaalmarin kasta oo weheliso waxay u dhaxeysaa $ 2,000 iyo $ 10,000. Waqtiga kama dambaysta ah ee la codsanayo waa May 30, 2016. [sii wad akhriska…]
Isuduwaha Manhajka ICNC ee Fasalka-Ku-saleysan iyo Barista Tooska ah ee Ku-Caabinta Rayidka
January 22, 2016 Fursadaha maalgelinta 0
Xarunta Caalamiga ah ee Colaadda Aan Xadgudubka Ahayn (ICNC) waxay daahfureysaa daabacaadda saddexaad ee barnaamijkeeda Cilmiga Manhajka Caannimada si loo taageero loona hormariyo labada fasal ku saleysan iyo barashada internetka ee iska caabinta shacabka. Sannadka 2016, illaa sideed manhaj wadaag, midkiiba qiyaastiisu tahay $ 1,300, ayaa lagu bixin doonaa saldhigyo furan, mudnaan iyo tartan jaamacadaha iyo macallimiinta iyo macallimiinta si ay u horumariyaan midkoodna manhaj ku saabsan iska caabinta madaniga ah ee lagu dari doono fasalka hadda jira. ku saleysan, la doorto ama qasab ah, koorso semester-dheer ah oo laga qaato jaamacadda guriga ee codsadaha ama aqoon isweydaarsi khadka tooska ah ah oo ku saabsan iska caabinta shacabka ee la siin doono ardayda iyo kaqeybgalayaasha daneynaya jaamacadda codsadaha, magaalada, degmada, waddanka ama gobolka. [sii wad akhriska…]
Jaamacadda Innsbruck waxay raadineysaa Asst. Borofisar ku takhasusay Barashada Nabadda
Musharraxa guuleysta waxaa la siin doonaa jagada 6-sano oo ah Kaaliyaha Jaamacadda/Kaaliyaha Professor ee Qeybta Nabadda iyo Daraasaadka Khilaafaadka. Musharraxa waxaa laga filayaa inuu horumariyo mashruuc cilmi -baaris oo madax -bannaan oo ku aaddan dhinaca nabadda iyo cilmi -baarista khilaafaadka iyadoo la adeegsanayo hab -aragtiyeed kaas oo tixgelinaya dhinacyada is -beddelka isku dhaca iyo/ama waxbarashada nabadda. [sii wad akhriska…]